पर्वतको भूक र भमरकोट -ओझेलमा परेको पर्यटकीय गन्तब्य – Radio Kushum
May 23, 2019 645
नेपालीमा उखानै छ ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ । यही नियति भोगिरहेको छ पर्वतको भूक देउराली गाउँले । बिश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय पदमार्ग अन्नपुर्ण पदमार्ग संग जोडिएपनि यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चाप बढ्न सकेको छैन । गुरुङ्ग समुदायको बाक्लो बस्ती, निलो रंगमा सजिएका घर, ढुंगाको छानोले सबैको मन लोभ्याउँछ । टाढैबाट हेर्दा पनि एकपटक भूक देउराली जाउँजाउँ भन्ने बनाउँछ सबैलाई । होमस्टे सञ्चालनका लागि कम्तीमा पनि १० घरले पुर्वाधार तयार पारेका छन । यहाँ पुग्ने सय जना जतिलाई सुबिधा सम्पन्न ढंगले स्थानिय परिकार खुवाउने र आवासको समेत सुबिधा दिन सकिन्छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चाप बढ्ने हो भने अरु धेरै घरहरु पर्यटकका लागि घरबास सुबिधा सञ्चालनका लागि तयार भएर बसेका छन । गुरुङ्ग जातिको मौलिक संस्कृति, पाहुनाको खुलेर स्वागत गर्ने परिपाटी शुरु भएको छ । गाउँ सम्म पुग्नका लागि पक्की मोटरबाटो निर्माणाधिन अबस्थामा छ । कच्ची सडकबाट बाह्रैमहिना पुग्न सक्ने अवस्था पनि छ । गाउँबाट पदयात्रा गर्दै भमरकोटबाट घोरेपानी पुग्न सकिन्छ । घरबास सञ्चालनका लागि सबै पुर्बाधार भएपनि प्रचारप्रसार र अन्य कारणले भूकले सोचे जसरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक तान्न सकेको छैन । भूक र आसपासको क्षेत्रमा पर्यटनको बिकास गर्न केही बर्ष देखि प्रयासहरु भैरहेका छन । यसले गर्दा केही आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने वातावरण भने बनेका छ ।
पर्वत जिल्ला पर्यटकीय संभावना भएर पनि ओझेलमा परेको जिल्ला हो । पर्यटनको राजधानी शहर पोखराबाट सबैभन्दा नजिक छ पर्वत । पर्वत भएर अर्को पर्यटकीय गन्तब्यको जिल्ला बन्दै गरेको मुस्ताङ्ग र म्याग्दी जाने हो । तर दुई ढुंगाको तरुल जस्तो पर्वत जिल्लाले पर्यटनबाट अहिले सम्म संभावना भएपनि फाइदा उठाउन सकेको छैन । भूक देउराली पनि त्यस्तै ठाउँ हो । भूक देउराली पर्यटक घोरोपानी जाने उल्लेखरीको छेउमै छ । नयाँपुलबाट घान्द्रुक , अन्नपुर्ण बेस क्याम्प जाने बिरठाँटी बजार संगै जोडिएको छ । अहिले बिरेठाँटीबाट उल्लेरी हुँदै घोरेपानी जाने पदयात्रा मार्ग सडक खनिएका कारण धुलाम्मे छ । भर्जिन पदमार्ग अहिले धुले पदमार्ग बनेको छ । घान्द्रुक सम्म नै बस जाने सुबिधा भएका कारण पदमार्गमा त्यसपछि खोज्नुपर्ने अबस्था छ । घान्द्रुकबाट घोरेपानी, अन्नपुर्ण आधारशिबीर गए जस्तै भूकबाट भमरकोट हुँदै घोरेपानी पुग्न भर्जिन पदमार्ग निर्माण भैरहेको छ । भमरकोट पर्यटन बिकास समितिको पहलमा काम भैरहेको छ ।
यो पदमार्ग र भूकदेउराली, देउपुर, देउराली, क्याङ्ग, लेकफाँट सम्म पर्यटनको बिकास गर्न राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सर्वाधिक चाँसो दिदै आएका पनि छन । उनको पहल र अगुवाईमा बजेट बिनियोजन भएका छन जसले गर्दा भमरकोट संरक्षण र नयाँ पदमार्गका निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भैरहेको छ । अहिले पनि भमरकोट सम्म देउपुर, भूक, ताङ्गले, पुर्णगाउँबाट पदमार्ग बनिरहेका छन । पछिल्लो समय पर्यटकहरु छिटफाट रुपमा जाने क्रम शुरु भएको छ ।
राष्ट्रियसभामा पुग्नु भन्दा पहिले देखि नै तिमिल्सिनाको योगदान अतुलनीय रहँदै आएको छ । तर एक बर्षको अबधीमा संघीय सरकारका पर्यटनमन्त्री स्व.रबिन्द्र अधिकारी देखि गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बिकास लम्साल देखि संघीय साँसदरु पदम गिरी, डा. सुर्य पाठक र प्रदेश साँसद चन्द्रमोहन गौचन सम्म पुगेर भूकको पर्यटन बिकासका लागि पहल गरेको पाइन्छ । पदमार्गलाई घोरेपानी सम्म जोड्ने, लप्सीबोटबाट पक्की सडकलाई भूक सम्म लैजाने, घुरुङ्गदी खोलाको पुल सम्पन्न गरि बाह्रै महिना नयाँपुल आउने पर्यटक भूक पुग्ने वातावरण मिलाउन काम गर्न सके केही बर्षभित्रमा भूक देउराली नमुना पर्यटकीय गाउँ बन्नेछ ।
भूकलाई नमुना पर्यटकीय गाउँ बनाउन प्रदेशमा बस्नेहरुले ६० लाख भन्दा बढी खर्च गरेर सडकबत्ती, सार्वजनिक शौचालय बनाएका छन । सडक र पदमार्ग बनाउने काम भैरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा भमरकोट सम्म पुग्न पदमार्ग बन्दैछ । अहिले भूक देउराली र घोरेपानी सम्म पुग्न नयाँ निर्माण भएको नयाँपुल–भमरकोट–घोरेपानी पदमार्गको अबलोकन गर्न पुगेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बिकास लम्साल, संघीय संसदका सदस्य डा. सुर्य पाठक सहितको टोली र स्थानियबासीले नमुना पर्यटकीय गाउँ बनाउने अभियानमा साथसाथै लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन । यसले गर्दा पर्यटकीय गाउँको रुपमा भूक स्थापित बन्ने बिश्वास लिन सकिन्छ ।